အွန်လိုင်းဓါတ်ပုံလှည့်ဖို့ကိုဘယ်လို - အွန်လိုင်းန်ဆောင်မှုများ - 2019
အများဆုံးလက်ငင်းတမန်တို့ကိုမတူဘဲ, ကြေးနန်းများတွင်အသုံးပြုသူ ID ကိုသူ့ဖုန်းမှတ်ပုံတင်ရေးအတွက်အသုံးပြုအရေအတွက်က, ဒါပေမယ့်လည်းပရိုဖိုင်းကိုမှ link တစ်ခုအဖြစ်ကိုလည်းလျှောက်လွှာအတွင်းအသုံးပြုနိုင်မယ့်ထူးခြားတဲ့အမည်ဖြင့်သာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင်များစွာသောလူထုလိုင်းများနှင့်ချက်တင်ခန်းတစ်ဦးဂန္ URL ကို-လိပ်စာများ၏ပုံစံအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လင့်များရှိသည်။ နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင်အသုံးပြုသူမှအသုံးပြုသူထံမှဤအချက်အလက်လွှဲပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်အများပြည်သူမျှဝေဖို့, သူတို့ကကူးယူထားရပါမည်။ ဒါကြောင့်ပြုမိသည်နှင့်ဤဆောင်းပါးတွင်ဆွေးနွေးကြလိမ့်မည်ကိုဘယ်လိုအကြောင်း။
အဆိုပါကြေးနန်းဖို့ link ကို copy
ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကို (လိုင်းများနှင့်ချက်တင်ခန်း) အဓိကအားဖြင့်အသစ်သောအဖွဲ့ဝင်များကဖိတ်ခေါ်ဖို့ဒီဇိုင်းကြေးနန်းအတွက်ပေးထားသောလင့်ခ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကောင်းကင်တမန်၏ရိုးရာအသွင်အပြင်ရှိခြင်း, အပေါ်က user name ကိုကပြောသည်အဖြစ်@name, ဒါ့အပြင်သင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အကောင့်ကိုသွားနိုင်သည့် link ကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ, ဖြစ်ပါတယ်။ algorithm ကိုပထမဦးဆုံးနှင့်ဒုတိယနီးပါးတူညီ, လျှောက်လွှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအသုံးပြုသည်အဘယ်မှာရှိသနည်း operating system ကိုတို့ကနှုတ်တိုက်ချပေးခဲ့တာအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များအတွက်မဆိုကွဲပြားခြားနားမှုနှစ်ဦးစလုံးကိုကော်ပီကူး။ ကျနော်တို့သီးခြားစီသူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီကိုကြည့်ဒါကြောင့်ပါပဲ။
တစ်ဦးကို PC သို့မဟုတ် Laptop ကိုအပေါ်ထပ်မံအသုံးပြုရန်ကြေးနန်းထဲမှာရုပ်သံလိုင်းနှုန်း Copy ကူး link ကို (ဥပမာစာစောင်သို့မဟုတ်ဂီယာ) Vindovs သာအနည်းငယ် mouse ကိုကလစ်တတ်နိုင်သမျှအတူ။ ဒီနေရာတွင်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလဲ:
သငျသညျဟန်းအောက်ကိုပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်လိုသည့် item ကိုပေါ်, ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမည်နှင့်ကိုယ်ပွားညွှန်ပြပေးသောထိပ်တန်း panel ကိုအပေါ်လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
pop-up window ထဲမှာ "Channel ကိုသတင်းအချက်အလက်"ဖွင့်လှစ်ဖြစ်စေရန်, သငျသညျကဲ့သို့သော link ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်t.me/name(ဒီချန်နယ်သို့မဟုတ်အများပြည်သူချက်တင် အကယ်. )
သို့မဟုတ်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု.@nameကတစ်ခုတည်းအသုံးပြုသူသို့မဟုတ် bot ကြေးနန်းဖြစ်ပါတယ်လျှင်။
တစ်ခုခုကိုအမှု၌, တစ်ဦးကိုကိုးကားရရှိရန်, mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှင့်အတူကို item ပေါ်တွင်နှိပ်ပါနှင့်သာမရရှိနိုင်တဲ့ item ကို select - "Copy ကူး Link ကို" (လိုင်းများနှင့်ချက်တင်သည်) သို့မဟုတ် "ဟုအဆိုပါအသုံးပြုသူအမည်ကူးပါ" (အသုံးပြုသူများနှင့် bot တွေဟာသည်) ။
ဥပမာအားဖြင့်အခြားအသုံးပြုသူတစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုပို့ခြင်းသို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်ရှိထုတ်ဝေချက်ချင်းအဲဒီနောက်, link ကိုပု clipboard ထံမှကူးယူပါလိမ့်မည်, ပြီးတော့သင်ကမျှဝေပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အဲဒီကကြေးနန်း, bot တစ်ကောင်, သို့မဟုတ်အများပြည်သူချက်တင်ရုပ်သံလိုင်းအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတခြားရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဖို့ link ကို copy ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မည်မျှလွယ်ကူသည်။ အဓိကအရာလျှောက်လွှာ link ကိုအတွင်းသာ URL ကို-လိပ်စာအမျိုးအစားမဟုတ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဖြစ်ပါသည်t.me/nameဒါပေမယ့်လည်းတိုက်ရိုက်အမည်@nameကားတက်ကြွစွာပြင်သည်တစ်ဦး instant messenger အစပျိုး, ပထမဦးဆုံးသာရှိပါသည်။
Android အတွက်ကြေးနန်း - ယခုငါတို့ Messenger ကို၏မိုဘိုင်းဗားရှင်းအတွက်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့ဘယ်လိုကြည့်ပါ။
အဆိုပါစာပေးစာယူကိုတိုက်ရိုက်သွားလိုပေါ်မှာ app ကို, အချတ်စာရင်းထဲမှာကရှာဖွေရေး, သင်ကူးယူလိုသောအရာမှ link တစ်ခုနှင့် tapnite ကိုဖွင့်။
အမည်နှင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုဓါတ်ပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်ကိုယ်ပွားညွှန်ပြပေးသော, ထိပ် panel ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှင့်အတူစာမျက်နှာကိုဖွင်လိမ့်မယ်ခင်မှာ "ဖျေါပွခကျြ" (အများပြည်သူချက်တင်ခန်းနှင့်ချန်နယ်များအတွက်)
သို့မဟုတ် "Information" ဆိုတဲ့ (ယေဘုယျအသုံးပြုသူများနှင့် bot တွေဟာသည်) ။
ပေးထားတဲ့ user name - ပထမအမှု၌သငျသညျဒုတိယအတွက် link ကို copy ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအသက်ဆိုင်တဲ့တံဆိပ်ပေါ်တွင်သင်၏လက်ညှိုးကိုကိုင်နှင့်ညျထငျရှားကို item ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ "Copy ကူး"အရာပြီးနောက်အချက်အလက်များကို clipboard ထံမှကူးယူပါလိမ့်မည်။
အခုဆိုရင်သင် download link ကိုမျှဝေနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါကြေးနန်း၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်ကူးယူ URL ကို-လိပ်စာများကိုပေးပို့ခြင်းတဲ့အခါမှာအစား link ကို၏ user name ကိုပြသပါလိမ့်မည်, ဒီလိုအဖြစ်မသာသင်မြင်ရပါလိမ့်မည်သတိပြုပါ, ဒါပေမယ့်လည်းလက်ခံရရှိသူပါ။
မှတ်ချက်: သငျသညျကူးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့လျှင်အခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုတစ်ဦးကိုကိုးကား, သင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းစကားရုံနည်းနည်းစေလွှတ်သောလိပ်စာကြောင့်ပေါ်တွင်သင်၏လက်ညှိုးကိုကိုင်, ပြီးတော့ pop-up menu ကိုမဟုတျပါဘူး, select လုပ်ပါ "Copy ကူး".
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, Android OS တို့တွင်ကြေးနန်းဖို့ link ကို copy ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုလည်းအဘယ်သူမျှမကြီးတွေသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ windose နှင့်အတူအမှုသည်အတိုင်း, ထိုတမန်အတွင်းလိပ်စာပုံမှန် URL ကိုဒါပေမယ့်အသုံးပြုသူအမည်သာဖြစ်ပါတယ်။
အခြားပါတီ messenger ကို bot, ချန်နယ်သို့မဟုတ်အများပြည်သူချက်တင် (supergroup) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် Windows နဲ့အန်းဒရွိုက်အထက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်၏အကောင့်လင့်ခ်ကိုကော်ပီကူးရန်, ကို iOS များအတွက်ကြေးနန်း-client ကို app ကို အသုံးပြု. Apple ကပစ္စည်းတွေ၏ပိုင်ရှင်များ, ပစ်မှတ်အကောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်မှပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါတယ် အသံဖမ်း။ အဆိုပါ iPhone / iPad ကနေညာဘက်ကိုသတင်းအချက်အလက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုရယူလိုက်ပါတကယ်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
Agios ဘို့ကြေးနန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သွားပါ "ချတ်များ" လျှောက်လွှာ, တမန်အတွက်အကောင့်အမည်ကို dialog သည့်ခေါင်းစီးများအကြားနေရာချထား, သင်ကူးယူလိုသောအရာမှ link တစ်ခု (type ကို "uchetki" အရေးမပါသည် - ကအသုံးပြုသူတစ်ဦး, bot, ရုပ်သံလိုင်း supergroup နိုင်ပါတယ်) ။ တစ်ဦးချက်တင်ကိုဖွင့်, အဲဒီနောက်မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်မှာလက်ခံရရှိသူရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုကိုယ်စားပြုပုံကိုထိပုတ်ပါ။
အကောင့်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. contents တွေကိုမျက်နှာပြင်ညွှန်ကြားချက်, ရှေ့အပိုဒ်၏ရလဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်ရကြလိမ့်မည် "Information" ဆိုတဲ့ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်, ထို့နောက်ကြေးနန်းအတွက်အကောင့်တစ်ခုလုပ်ဖို့ link တစ်ခုပါရှိသည်တဲ့ box ကိုလည်းမရှိ, ညွှန်ပြနေသည်:
တမန်အတွက်လိုင်းများ (ပြည်သူ့) အတွက် - "ကိုးကားစရာ".
အများပြည်သူ chat ပြုလုပ်ခြင်း - မဆိုသင်္ကေတလင့်ခ်၏ပုံစံအတွက်ထောက်ပံ့ပေး, ပျောက်ဆုံးနေသည်t.me/имя_группыsupergroups များ၏ဖော်ပြချက်အောက်မှာ။
သာမန်အသုံးပြုသူများနှင့် bot တွေဟာအဘို့ - "အသုံးပြုသူအမည်".
မေ့လျော့မနေပါနဲ့ @username ဒါကြောင့်သီးသန့်ကြေးနန်းဝန်ဆောင်မှုအတွင်း (ဆိုလိုသည်မှာပြုလုပ်အပေါ်တစ်ဦးထိတွေ့သက်ဆိုင်ရာပရိုဖိုင်းနဲ့ချက်တင်တစ်ခုအကူးအပြောင်းမှဦးဆောင်) တစ်ဦးကိုကိုးကားသည်။ အခြား application များတွင်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ၏လိပ်စာကိုသုံးပါ t.me/username.
ဘယ်ဟာကိုအမျိုးအစားက iOS ကို clipboard ထဲမှာလက်ခံရရှိရန်, link ကိုအထက်ပါအဆင့်ဖျော်ဖြေဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေ့ရှိသည်မဟုတ်, သင်နှစ်ခုလုပ်ရပ်များ၏တဦးတည်းလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်:
အပေါ်တစ်ဦးကရေတိုကိုထိပုတ်ပါ@usernameသို့မဟုတ်ပြည်သူ့ / အုပ်စုတစ်စုခဲမှာ menu က၏အသွင်အပြင်မှ "Send" ရရှိနိုင်အသံဖမ်း (ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောမေးဖြေ) ၏စာရင်းအပြင်လက်ရှိမသန်စွမ်းသောတမန်အားဖြင့် "link ကိုကူးပါ" - ကထိပုတ်ပါ။
link တစ်ခုသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူတစ်ဦးအမည်ပေါ်တွင် Long ကစာနယ်ဇင်းတစ်ခုတည်းအချက်ပါဝင်သည်ဟုလုပ်ရပ်များတစ် menu က, ထဆောင်တတ်၏ - "Copy ကူး"။ ဒီမျဉ်းပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ထို့ကြောင့် iOS ကိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကြေးနန်းအကောင့်လင့်များကူးယူ၏တာဝန်, အထက်ပါညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်, ငါတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ။ ထို့နောက်ရှည်လျားသောအလုံအလောက်မဆိုလျှောက်လွှာများကို iPhone / iPad ကို text field ထဲမှာတွန်းအားပေးရန် clipboard ထံကနေဖယ်ရှားကြောင်းလိပ်စာနှင့် tapnut နှင့်အတူနောက်ထပ်ကိုင်တွယ်များအတွက် "ထည့်".
အခုဆိုရင်သင်မည်သည့်ကြေးနန်းအကောင့်တစ်ခုရည်ညွှန်းဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ကို Android နှင့် iOS နှင့်အတူ desktop ပေါ်မှာ Windows OS ကိုများနှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်နှစ်ခုလုံးကိုကူးယူထားပါသည်ဘယ်လိုသိကြ၏။ အကြှနျုပျတို့သညျမဆိုမေးခွန်းများဆောင်ပုဒ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြလျှင်, မှတ်ချက်များအတွက်သူတို့ကိုမေးကြည့်ပါ။